तिथि मेरो पत्रु »6सुझाव तपाईंको अन्तिम हुनबाट पहिलो तिथि रोक्नुहोस् लागि
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 30 2020 |2मिनेट पढ्न
पहिलो तिथिहरु. हामी उत्सुकतासाथ जादुई क्षण को आशा. तिनीहरूले प्राणपोषक हुन सक्छ, र अझै intimidating. थुप्रै तरिकामा, तिनीहरूले काम साक्षात्कार को बराबर हुनुहुन्छ. यो ACE, र तपाईं भविष्य सवा आशा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोत्साहन, र अन्तिम पदोन्नति. (अनि यो एक अनुकूल "प्रदर्शन समीक्षा" आशा गरौं।)
अर्कोतर्फ, गलत पहिरन लगाउने, नभन्दै संवाद, वा आधारभूत सामाजिक गौरव मा कमी हुनु प्रकट, र तपाईं अगाडी बढन फिर्ता भनिन्छ भइरहेको बिर्सन पनि सक्छन्.
अनि यो यसको सामना गरौं: प्रतियोगिता दुवै मैदानहरू मा भीषण हुन सक्छ.
यहाँ6सबै-महत्त्वपूर्ण पहिलो तारीख लागि "मानक संचालन प्रक्रिया" को रूपमा अपनाउनु अभ्यासहरू तपाईं चाहनुहुन्छ छौँ.
1. आफ्नो सर्वश्रेष्ठ खुट्टा अगाडि राख्न.
समय मा हुनुहोस्. सफलता लागि ड्रेस. आफ्नो सेल फोन wraps अन्तर्गत राख्नुहोस्. केही फोन खानाको समयमा निरन्तर बन्द जाने भएको भन्दा थप बाध्यात्मक वा निराश बनाउन सक्छ. तपाईं कोही एक कल लिनुपर्छ भने, (यो महत्त्वपूर्ण कारण) यो छोटो बनाउन प्रयास– क्षमायाचना संग.
"तपाईं एक पहिलो प्रभाव बनाउन एक दोश्रो मौका प्राप्त छैन।" भनेर सम्झना
2. एक असल श्रोता हुनुहोस्.
यो रोटी र कुराकानी हग गर्न कुनै समय छ.
अन्य व्यक्ति चिन्नुको सक्रिय चासो लिनुहोस्. तिमी को हो बारेमा कुरा वा दुई साझा र के तपाईं महसुस तपाईं विशिष्ट तपाईं बनाउँछ. दखल प्रश्न सोधेर जोगिने.
3. सधैं उपयुक्त हुन.
सम्झना, यहाँ उद्देश्य राम्रो तरिकामा बाहिर खडा छ.
विगतमा सम्बन्ध असफल बारेमा शेखी नगर्नुहोस्, बन्द रंग मजाक बताउन, वा सेवा प्रदायकहरू गर्न कठोर व्यवहार. यो तपाईं uncouth रूपमा भर आउन बनाउन सक्छ.
4. शरीर भाषा ध्यान.
तपाईं थाह थियो 93% सञ्चार गैर-मौखिक हुन भने छ?
आसन जस्तै कुराहरू, अनुहार अभिव्यक्ति, आँखा सम्पर्क र शरीर स्थिति आफ्नो मिति लगे र चासो छ भने तपाईं आकलन गर्न मदत गर्न सक्छ, वा तपाईं आफ्नो नम्बर गुमाउनुहुनेछ आशा. को संकेत पालन.
वित्त एक पहिलो तारीख मा रोमान्स अघि आएको कहिल्यै गर्नुपर्छ. अनि घटियापन अधिकांश मान्छे को लागि एक निश्चित बारी-बन्द छ. तपाईं हुनुहुन्छ भने नगद चुनौती, रचनात्मक हुन; मैनबत्तीमा र संगीत संग एक स्वादिष्ट घर पकाएको भोजन विचार.
6. एक सकारात्मक टिप्पणी मा अन्त.
दयालु हुनुहोस्. तपाईं एउटा राम्रो समय थियो भने, यति भन्न. सुरु रूपमा निस्कनुहोस् जस्तै महत्त्वपूर्ण छन्.
आफ्नो पहिलो तारीख पहिलो दर बनाउन यी छ समयानुकूल सुझाव पालन!
यो बस विशेष कुरा को शुरुवात हुन सक्छ.
तपाईंको तिथि प्रभावित – सफलताका लागि ड्रेस